नयाँ अवतारमा आयो रोयल इन्फिल्ड इन्टरसेप्टर ६५० र कन्टिनेन्टल जीटी ६५०, मूल्य कति पर्ला ? – ramechhapkhabar.com
नयाँ अवतारमा आयो रोयल इन्फिल्ड इन्टरसेप्टर ६५० र कन्टिनेन्टल जीटी ६५०, मूल्य कति पर्ला ?
काठमाडौं । रोयल इन्फिल्डले ६५० सीसी सेगमेन्टमा इन्टरसेप्टर आईएनटी ६५० र कन्टिनेन्टल जीटी ६५० ट्विन बाइक लन्च गरेको छ । सो बाइकमा ५ नयाँ रङको विकल्प रहेको छ ।
इन्टरसेप्टर आईएनटी ६५०को सिंगल टोन कलर भेरिएन्टको मूल्य २ लाख ७५ हजार भारु तोकिएको छ । यसको डुअल कलर टोन अप्सनको मूल्य २ लाख ८३ हजार भारु रहेको छ । सो बाइकको क्रोम मार्क २ भेरिएन्टको मूल्य २ लाख ९७ हजार भारु रहेको छ ।
कन्टिनेन्टल जीटी ६५० को सिंगल टोन भेरिएन्टको मूल्य २ लाख ९१ हजार भारु, डुअल टोन भेरिएन्टको मूल्य २ लाख ९९ हजार भारु र क्रोम मिस्टर क्लिन भेरिएन्टको मूल्य ३ लाख १३ हजार भारु तोकिएको छ ।
कम्पनीले सो बाइकमा कस्टमाइजेसनको विकल्प दिएको छ । जसमा ग्राहकको मनपर्ने लुक प्रदान गर्न सकिन्छ । मेक ईट योर्स विकल्पमा सिट, टुरिङ मिरर, फ्लाईस्क्रिन, सम्प गार्ड समेत केही अन्य पार्ट्स पनि कस्टमाइज गर्न सकिन्छ । यद्यपि सो बाइकको २०२१ मोडलमा ट्रिपर नेभिगेसन समावेश गरिएको छ । सो बाइकमा केही मेकानिकल परिवर्तन गरिएको छैन ।
रोयल इन्फिल्ड इन्टरसेप्टर ६५० को क्यानोन रेड र भेन्चुरा ब्ल्यु जस्ता स्ट्यान्डर्ड सिंगल टोन कलरको साथमा डाउनटाउन ड्रग र सनसेट स्ट्रिप जस्ता कस्टम डुअल कलर टोन समावेश गरिएको छ । सो बाइकको क्रोम मार्क २ अपडेट भर्सनमा पनि लन्च गरिएको छ । इन्टरसेप्टर ६५० ओरेन्ज क्रस र बेकर एक्सप्रेस कलरमा उपलब्ध रहेको छ ।
रोयल इन्फिल्ड कन्टिनेन्टल जीटी६५० २०२१ डुक्स डिलक्स र भेन्चुरा स्ट्रोम सिंगल कलर टोनको साथमा क्रोम भेरिएन्टमा मिस्टर क्लिन अपडेट भर्सनमा पेश गरिएको छ । सिंगल टोन कलर अप्सनमा रकर रेड र ब्रिटिस रेसिङ ग्रिन पनि रहेको छ । कम्पनीले सो बाइकमा सिंगल टोन कलर भेरिएन्टमा रिम्स र मडगार्डलाई ब्ल्याक कलरमा प्रस्तुत गरेको छ । नेपाल अट्टाे